Ihe ndị a ga-eme ka onye ekpenta dị ọcha (1-32)
Ime ka ụlọ ekpenta dị na ya dị ọcha (33-57)
14 Jehova gwakwara Mosis, sị: 2 “Ihe a bụ iwu a ga-edebe n’ụbọchị a ga-egosi na onye ekpenta adịla ọcha, mgbe a ga-akpọrọ ya gakwuru onye nchụàjà.+ 3 Onye nchụàjà ga-esi n’ebe ndị Izrel mara ụlọikwuu pụọ gaa leruo ya anya. Ọ bụrụ na ekpenta ya alaala, 4 onye nchụàjà ga-enye ya iwu ka ọ nwụta nnụnụ abụọ dị ndụ bụ́ ndị na-esoghị ná nnụnụ ndị na-adịghị ọcha, wetakwa osisi sida, ákwà na-acha uhie uhie, na ahịhịa hisop ka e jiri ha mee ka ọ dị ọcha.+ 5 Onye nchụàjà ga-enye iwu ka e gbuo otu nnụnụ n’ite ụrọ nke mmiri e kutere n’iyi dị n’ime ya. 6 Ma ọ ga-anwụrụ nnụnụ nke ọzọ dị ndụ, werekwa osisi sida ahụ, ákwà ahụ na-acha uhie uhie, na ahịhịa hisop ahụ ma sụnyekọta ha n’ọbara nnụnụ ahụ e gburu n’ite ụrọ nke mmiri e kutere n’iyi dị n’ime ya. 7 Ọ ga-efesa ọbara ahụ ugboro asaa n’ahụ́ onye ekpenta ahụ na-eme onwe ya ka ọ dị ọcha, kwuokwa na ọ dịla ọcha. Ọ ga-ahapụzi nnụnụ ahụ dị ndụ ka o feba n’ọhịa.+ 8 “Onye ahụ nke na-eme onwe ya ka ọ dị ọcha ga-asụ uwe ya, kpụọ ntutu niile na ajị niile dị ya n’ahụ́ ma jiri mmiri saa ahụ́. Ọ ga-adịzi ọcha. E mechaa, ọ ga-abata n’ebe ndị Izrel mara ụlọikwuu. Ma, ọ gaghị abanye n’ụlọikwuu ya ruo ụbọchị asaa. 9 N’ụbọchị nke asaa, ọ ga-akpụ ntutu niile dị ya n’isi na ajị agba ya na iku anya ya. Mgbe ọ kpụchara ntutu ya niile na ajị niile dị ya n’ahụ́, ọ ga-asụ uwe ya ma jiri mmiri saa ahụ́. Ọ ga-adịzi ọcha. 10 “N’ụbọchị nke asatọ, ọ ga-akpụta ebule abụọ ahụ́ dị mma, otu nne atụrụ ahụ́ dị mma+ nke na-agafebeghị otu afọ, butekwa ụzọ atọ n’ụzọ iri nke otu efa* ntụ ọka e gwere nke ọma, nke a gwara mmanụ, ka ọ bụrụ àjà ọka,+ nakwa otu lọg* mmanụ.+ 11 Onye nchụàjà nke kwuru na onye ahụ na-eme onwe ya ka ọ dị ọcha adịla ọcha ga-akpọta ya n’ihu Jehova n’ọnụ ụzọ ụlọikwuu nzute, wetakwa ihe ndị o wetara. 12 Onye nchụàjà ga-akpụrụ otu ebule chụọ n’àjà ka ọ bụrụ àjà ikpe ọmụma,+ ya na otu lọg mmanụ ahụ. Ọ ga-efegharị ha ka ha bụrụ àjà a na-efegharị efegharị n’ihu Jehova.+ 13 Ọ ga-egbu ebule ahụ n’ebe a na-egbu anụ e ji achụ àjà mmehie na anụ e ji achụ àjà a na-esu ọkụ,+ n’ebe dị nsọ, n’ihi na ọ bụ onye nchụàjà nwe anụ e ji achụ àjà ikpe ọmụma otú ọ bụkwa ya nwe anụ e ji achụ àjà mmehie.+ Ọ bụ ihe kacha nsọ.+ 14 “Onye nchụàjà ga-eweretụ ọbara anụ ahụ e ji chụọ àjà ikpe ọmụma. Onye nchụàjà ga-etesa ya n’ọnụ ọnụ ntị aka nri nke onye ahụ na-eme onwe ya ka ọ dị ọcha nakwa na mkpịsị aka ukwu nke aka nri ya nakwa na mkpịsị ụkwụ ukwu nke ụkwụ aka nri ya. 15 Onye nchụàjà ga-esi n’otu lọg mmanụ+ ahụ gbara mmanụ wụnye n’ọbụ aka aka ekpe ya. 16 Onye nchụàjà ga-arụnyezi mkpịsị aka aka nri ya ná mmanụ ahụ dị n’ọbụ aka aka ekpe ya ma fesa mmanụ ahụ n’ala n’ihu Jehova. Ọ ga-eme ya ugboro asaa. 17 Onye nchụàjà ga-etesa mmanụ fọrọ n’ọbụ aka ya n’ọnụ ọnụ ntị aka nri nke onye ahụ na-eme onwe ya ka ọ dị ọcha nakwa na mkpịsị aka ukwu nke aka nri ya nakwa na mkpịsị ụkwụ ukwu nke ụkwụ aka nri ya, n’elu ebe ndị o tesaburu ọbara anụ e ji chụọ àjà ikpe ọmụma. 18 Onye nchụàjà ga-ete mmanụ fọrọ ya n’ọbụ aka n’isi onye ahụ na-eme onwe ya ka ọ dị ọcha. Onye nchụàjà ga-ekpuchiri onye ahụ mmehie ya n’ihu Jehova.+ 19 “Onye nchụàjà ga-achụ anụ e ji achụ àjà mmehie+ ahụ n’àjà wee kpuchiere onye ahụ na-eme onwe ya ka ọ dị ọcha mmehie ya. E mechaa, ọ ga-egbu anụ e ji achụ àjà a na-esu ọkụ. 20 Onye nchụàjà ga-achụ anụ ahụ e ji achụ àjà a na-esu ọkụ n’ebe ịchụàjà, chụọkwa àjà ọka+ ahụ n’ebe ahụ. Onye nchụàjà ga-ekpuchiri onye ahụ mmehie ya.+ Ọ ga-adịzi ọcha.+ 21 “Ma ọ bụrụ na ọ bụ ogbenye, ya abụrụkwa na aka erughị ya iweta ihe ndị ahụ, ọ ga-akpụta otu ebule a ga-eji chụọ àjà ikpe ọmụma ka ọ bụrụ àjà a na-efegharị efegharị, ka e wee kpuchiere ya mmehie ya. Ọ ga-ebutekwa otu ụzọ n’ụzọ iri nke otu efa* ntụ ọka e gwere nke ọma, nke a gwara mmanụ, ka ọ bụrụ àjà ọka, nakwa otu lọg mmanụ, 22 nwụtakwa nduru abụọ ma ọ bụ ụmụ kpalakwukwu abụọ, nke aka ruru ya. A ga-eji otu chụọ àjà mmehie, jiri nke ọzọ chụọ àjà a na-esu ọkụ.+ 23 N’ụbọchị nke asatọ,+ ọ ga-ewetara ha onye nchụàjà n’ihu Jehova n’ọnụ ụzọ ụlọikwuu nzute ka e jiri ha gosi na ọ dịla ọcha.+ 24 “Onye nchụàjà ga-akpụrụ ebule ahụ a ga-eji chụọ àjà ikpe ọmụma,+ werekwa otu lọg mmanụ ahụ. Onye nchụàjà ga-efegharị ha ka ha bụrụ àjà a na-efegharị efegharị n’ihu Jehova.+ 25 Ọ ga-egbu ebule ahụ e ji achụ àjà ikpe ọmụma. Onye nchụàjà ga-eweretụ ọbara anụ ahụ e ji achụ àjà ikpe ọmụma tee n’ọnụ ọnụ ntị aka nri nke onye ahụ na-eme onwe ya ka ọ dị ọcha nakwa na mkpịsị aka ukwu nke aka nri ya nakwa na mkpịsị ụkwụ ukwu nke ụkwụ aka nri ya.+ 26 Onye nchụàjà ga-awụnyetụ mmanụ ahụ n’ọbụ aka aka ekpe nke ya.+ 27 Onye nchụàjà ga-eji mkpịsị aka aka nri ya fesa mmanụ ahụ dị n’ọbụ aka aka ekpe ya n’ala n’ihu Jehova. Ọ ga-eme ya ugboro asaa. 28 Onye nchụàjà ga-etesa mmanụ ahụ dị n’ọbụ aka ya n’ọnụ ọnụ ntị aka nri onye ahụ na-eme onwe ya ka ọ dị ọcha nakwa na mkpịsị aka ukwu nke aka nri ya nakwa na mkpịsị ụkwụ ukwu nke ụkwụ aka nri ya, n’elu ebe ndị o tesaburu ọbara anụ e ji chụọ àjà ikpe ọmụma. 29 Onye nchụàjà ga-etezi mmanụ fọrọ ya n’ọbụ aka n’isi onye ahụ na-eme onwe ya ka ọ dị ọcha, ka o wee kpuchiere ya mmehie ya n’ihu Jehova. 30 “Ọ ga-achụ otu n’ime nduru ndị ahụ n’àjà ma ọ bụ otu n’ime kpalakwukwu ndị ahụ, nke aka ruru onye ahụ iweta,+ 31 nke ọ ga-ewetali, ka ọ bụrụ àjà mmehie, chụọkwa nke ọzọ ka ọ bụrụ àjà a na-esu ọkụ.+ Ọ ga-achụkọta ha na àjà ọka ahụ. Onye nchụàjà ga-ekpuchiri onye ahụ na-eme onwe ya ka ọ dị ọcha mmehie ya n’ihu Jehova.+ 32 “Ihe a bụ iwu banyere onye na-arịa ọrịa ekpenta nke na-enweghị otú ọ hà ya mgbe a na-egosi na ọ dịla ọcha.” 33 Jehova wee gwa Mosis na Erọn, sị: 34 “Mgbe unu batara na Kenan,+ bụ́ ala m ga-enye unu ka unu biri na ya,+ m wee kwe ka ọrịa ekpenta dịrị n’ụlọ dị n’ala unu,+ 35 onye nwe ụlọ ahụ ga-abịa gwa onye nchụàjà, sị, ‘E nwere ihe yiri ọrịa pụtara n’ụlọ m.’ 36 Onye nchụàjà ga-enye iwu ka e wepụchaa ihe ndị dị n’ụlọ ahụ tupu ya abịa ileru ihe ahụ pụtara n’ụlọ ahụ anya, ka ọ ghara ikwu na ihe niile dị n’ụlọ ahụ adịghị ọcha. E mechaa, onye nchụàjà ga-abata ka o leruo ụlọ ahụ anya. 37 Ọ ga-eleru ebe ihe ahụ pụtara anya. Ọ bụrụ na ebe ihe ahụ pụtara n’ahụ́ ụlọ ahụ na-achatụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ ọbara ọbara, ọ bụrụkwa na o yiri ka hà bara ime n’ahụ́ ụlọ ahụ, 38 onye nchụàjà ga-esi n’ụlọ ahụ pụta gaa n’ebe e si abanye n’ụlọ ahụ. Ọ ga-emechi ụlọ ahụ ka a ghara ịbanye na ya ruo ụbọchị asaa.+ 39 “Onye nchụàjà ga-abịaghachi n’ụbọchị nke asaa leruo ya anya. Ọ bụrụ na ihe ahụ pụtara n’ụlọ ahụ agbasaala n’ahụ́ ụlọ ahụ, 40 onye nchụàjà ga-enyezi iwu. A ga-akụpụta nkume ndị ihe ahụ yiri ọrịa dị na ha ma tụfuo ha n’azụ obodo, n’ebe a na-ekpofu ihe na-adịghị ọcha. 41 Ọ ga-ahụ na a kpụchasịrị ime ụlọ ahụ nke ọma. A ga-ekporo ájá ụrọ a kpụchapụtara na ya kpofuo n’azụ obodo, n’ebe a na-ekpofu ihe na-adịghị ọcha. 42 Ha ga-ewerezi nkume ndị ọzọ dochie nkume ndị ahụ ha kụpụsịrị. A ga-ejikwa ájá ụrọ ọzọ techie ahụ́ ụlọ ahụ. 43 “Ma ọ bụrụ na ihe ahụ yiri ọrịa apụtaghachi, a hụ ya n’ụlọ ahụ mgbe a kụpụchara nkume ndị ọ pụtaburu na ha ma kpụchasịa ahụ́ ụlọ ahụ, jirikwa ájá ụrọ ọzọ techie ya, 44 onye nchụàjà ga-abanye leruo ya anya. Ọ bụrụ na ihe ahụ yiri ọrịa agbasaala n’ụlọ ahụ, ọ bụ ajọ ekpenta+ pụtara n’ụlọ ahụ. Ụlọ ahụ adịghị ọcha. 45 Ọ ga-ahụ na a kwaturu ụlọ ahụ, ma nkume ya niile ma osisi ya niile ma ájá ụrọ niile e ji techie ya. Ọ ga-ahụkwa na e bugara ha n’azụ obodo, n’ebe a na-ekpofu ihe na-adịghị ọcha.+ 46 Ma onye ọ bụla banyere n’ụlọ ahụ n’ụbọchị ndị e mechiri ya ka a ghara ịbanye na ya+ agaghị adị ọcha ruo mgbede.+ 47 Onye ọ bụla dinara ala n’ụlọ ahụ ga-asụ uwe ya. Onye ọ bụla riri nri n’ụlọ ahụ ga-asụ uwe ya. 48 “Ma, ọ bụrụ na onye nchụàjà abịa hụ na ihe ahụ yiri ọrịa agbasaghị n’ụlọ ahụ mgbe e jirila ájá ụrọ ọhụrụ techie ahụ́ ụlọ ahụ, onye nchụàjà ga-ekwu na ụlọ ahụ adịla ọcha, n’ihi na ihe ahụ yiri ọrịa alaala. 49 Ọ ga-ewere nnụnụ abụọ, osisi sida, ákwà na-acha uhie uhie, na ahịhịa hisop+ ma jiri ha mee ka ụlọ ahụ dị ọcha.* 50 Ọ ga-egbu otu nnụnụ n’ite ụrọ nke mmiri e kutere n’iyi dị n’ime ya. 51 Ọ ga-ewere osisi sida ahụ, ahịhịa hisop, ákwà na-acha uhie uhie, na nnụnụ nke ọzọ dị ndụ ma sụnyekọta ha n’ọbara nnụnụ ahụ e gburu n’ite ụrọ nke mmiri e kutere n’iyi dị n’ime ya. Ọ ga-efesakwa ọbara ahụ ugboro asaa+ n’ụlọ ahụ. 52 Ọ ga-eji ọbara nnụnụ ahụ, mmiri ahụ e kutere n’iyi, nnụnụ ahụ dị ndụ, osisi sida ahụ, ahịhịa hisop ahụ, na ákwà ahụ na-acha uhie uhie mee ka ụlọ ahụ dị ọcha.* 53 Ọ ga-esizi n’obodo pụta ma hapụ nnụnụ ahụ dị ndụ ka o feba n’ọhịa. Ọ ga-esi otú ahụ kpuchiere ụlọ ahụ mmehie. Ụlọ ahụ ga-adịzi ọcha. 54 “Ihe a bụ iwu banyere ekpenta, ọrịa bịara mmadụ n’ala isi ma ọ bụ n’afụ ọnụ,*+ 55 ihe yiri ọrịa ekpenta nke pụtara n’uwe+ ma ọ bụ n’ụlọ,+ 56 nakwa banyere ebe ahụ́ mmadụ zara aza, ebe mmadụ nwere ihe yiri ọnyá kpọchiri akpọchi n’ahụ́ ya, nakwa ebe ntụpọ pụtara n’ahụ́ mmadụ.+ 57 A ga-eji iwu a mata mgbe ihe na-adịghị ọcha na mgbe ihe dị ọcha.+ Ọ bụ ya bụ iwu banyere ekpenta.”+
^ Efa bụ ihe e ji atụ̀ ihe. Ụzọ atọ n’ụzọ iri nke otu efa bụ lita 6.6. Gụọ B14.
^ Lọg bụ ihe e ji atụ̀ ihe. Otu lọg bụ lita 0.31. Gụọ B14.
^ Na Hibru, “sachapụ ụlọ ahụ mmehie.”